အမေဇုံသည်အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် Mobipocket နှင့်၎င်း၏ဆာဗာများကိုပိတ်မည် | eReaders အားလုံး
အကယ်စင်စစ်သင့်အများတို့သည် Mobipocket၊ ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်း၏ ebook စတိုးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်သင် ebooks ကိုအသုံးပြုပါက“ mobi” ပုံစံသည်သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိမ့်မည်။ လက်ရှိအမေဇုံပိုင်ဆိုင်သောဤပုံစံသည်အမြဲတမ်းမဟုတ်သကဲ့သို့ဝေးလံခေါင်သီသောအတိတ်တွင်မဟုတ်ခဲ့ပါ၊ mobi ကုမ္ပဏီ Mobipocket ပိုင်သောပုံရသည် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့မှစ၍ ၎င်းသည်တံခါးများကိုအတိအကျပိတ်လိမ့်မည်.
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်အမေဇုံသည်ဤကုမ္ပဏီကို ၀ ယ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုဂေဟစနစ်တွင်ထည့်သွင်းရန်အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ၁၁ နှစ်နီးပါးအကြာမှာ Amazon ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဝဘ်ကိုပိတ်ပြီးအသုံးပြုသူများအတွက်အနည်းငယ်သာကျန်သည်အခြားအချက်များအရ၊ drm ပါသော ebook များရောင်းချမှုကျဆင်းသွားခြင်းနှင့် Mobipocket မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ယူမှုများမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Mobipocket သည်၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်း၏ဆာဗာများကိုပိတ်လိမ့်မည်
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Caliber နှင့်အမျိုးမျိုးသော converter ကိုအစီအစဉ်များအကြား, ကယ်ဆယ်ခြင်းမရှိဘဲကျန်ရှိသည့် ebook တစ်ခုကျန်ရှိနေသည်တစ်နည်းပြောရလျှင်ဖောက်သည်ဟောင်းများသည်သူတို့ဝယ်ယူထားသည့်အရာမှန်သမျှဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Amazon သည် ebook နှင့်ပိုက်ဆံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငွေဖြင့်ဖြစ်စေမည်သည့်အမှားကြောင့်မဆိုသက်ဆိုင်သူများအားမည်သို့လျော်ကြေးပေးမည်ကိုသေချာပေါက်သိလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒဏ္myာရီဆန်သောကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခု၏ပိတ်သိမ်းမှုကိုရင်ဆိုင်နေရသည် ebook ပုံစံနှင့် Adobe နှင့် Microsoft တို့ခေတ်အတူတူဖြစ်သည် ၎င်း၏ lit format နဲ့။
Amazon သည် ebook စာအုပ်လောကတွင်လက်ရှိအရေးပါမှုကိုရရှိရန်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အထောက်အကူပြုသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် Mobipocket ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပိတ်ရုံသာမက၎င်းကို format နှင့်ဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ azw o Kindle အမျိုးအစား 8.
ကံမကောင်းစွာသော်လည်းသူတို့အားပုံစံများ၏အနည်းငယ်သာအကြွင်းအကျန် အခြားပုံစံအသစ်များရောက်လာပြီအခမဲ့ Epub format၊ အမေဇုန်ပစ္စည်းအချို့နှင့်မကိုက်ညီသောပုံစံဖြစ်သော်လည်း Mobi format တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ Epub ဟာ Amazon ထုတ်ကုန်များကြားမှာနေရာယူလာမှာသေချာတယ် သို့မဟုတ်မဟုတ်လော သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » Amazon သည်အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် Mobipocket နှင့်၎င်း၏ဆာဗာများကိုပိတ်မည်